VaNcube Vanoti Bato Ravo Richakunda Zvine Mutsindo
Muvhuro, Kukadzi 08, 2016 Local time: 11:58
GWERU— Mutungamiri weMDC duku, VaWelshman Ncube, vanoti bato ravo rakagadzirira kupinda musarudzo pasi pebumbiro remitemo yenyika riripo pari zvino kana pakaita kusawirirana pabumbiro riri kunyorwa.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano nevatsigiri vavo paMaboleni kuLower Gweru neSvondo, VaNcube vakati bato ravo rakazvipira kupinda musarudzo pasi pebumbiro riripo kunyange nyika ikatadza kuve nebumbiro idzva remitemo yenyika.
VaNcube, avo vakaudza vatsigiri vavo kuti zvinonetsa kuwana bumbiro remitemo yenyika rakanaka pasi pehutongi hwehudzvanyiriri, vakati kana zvekuve nebumbiro idzva iri zvaramba nekuda kwemakakatanwa aripo, nyika inogona kuzove nebumbiro idzva iri pane imwe nguva.
VaNcube vakashora zvikuru bato reZanu PF vachiti bato iri riri kuda kumanikidza mamwe mapato nevanhu vese vemunyika kuti vaite zvido zvaro.
Zvikwata zviviri zveMDC zvave nenguva zvichiti zvichapinda musarudzo chete kana misariridzwa yese yemuchibvumirano cheGlobal Political Agreement yazadzikiswa.
Asi VaNcube vakati mitemo yenyika inoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa gore rinouya zvisinei kuti pave nebumbiro idzva remitemo yenyika here kana kuti kwete.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona bato ravo richikunda here musarudzo, VaNcube, avo vave nenguva vachiramba kuti bato ravo richabatana neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai vakati bato ravo harifanirwe kunzi ibato diki kune mamwe vachiti vanoona bato ravo richikunda zvine mutsindo musarudzo.
Panyaya yekuti sei kumutsurudzwa kwemakambani emunyika kusiri kufamba zvakanaka, VaNcube, avo vanovewo gurukota rezvemaindasitiri vakati izvi zviri kunyanyokonzerwa nekusadhonzera pamwe chete kunoitika muhurumende yemubatanidzwa.
VaNcube vakazivisa kuti svondo rapera hurumende yakavimbisa kambani yeEssar Africa Holdings, iyo yakatenga kambani yeZiscosteel kubva kuhurumende, kuti yaizozadzikisa chibvumirano chayo nekambani iyi panyaya yezviwanikwa zvesimbi zviri kumwanesi pedyo nechivhu.
Kambani yeEssar Africa yange yave kutsutsumwa nekuda kwemashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvemigodhi, VaGift Chimanikire, ekuti hurumende ichapa marezinesi ekuchera zviwanikwa muZimbabwe.
Chikwata chaVaNcube chiri kuita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika sezviri kuitwa nechikwata cheMDC inotungamirwa naVaTsvangirai nechinangwa chekuzivisa vatsigiri pamusoro pezviri kuitika munyika kunyanya panyaya yebumbiro idzva remitemo yenyika pamwe nesarudzo idzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.